Faysal Cali Waraabe, ma mucaaradbaa mise muxaafad? | Berberanews.com
Home WARARKA Faysal Cali Waraabe, ma mucaaradbaa mise muxaafad?
Rasmi ahaan waa guddoomiyaha ururka mucaaradka UCID ee jamhuuriyadda iskeed madaxbanaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland, balse Faysal Cali Waraabe su’aalo badan ayaa la’iska weeydiinayaa labada dhinac kan uu jiro. Waxay arrintan cirka isku sii shareertay markii ay soo baxeen sawirro muujinaya kulan dhexmaray isaga iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Halkan Riix Warbixintoo Dhammaystiran
Previous articleHogaamiyeyaasha Itoobiya iyo Eritrea oo billad ku helay dadaakii nabadda
Next articleMadaxweyne Muuse oo casho-sharaf ku maamuusay aqoonyahan ka soo qaybgalay Bandhigga Buugaagta Hargeysa